I-Deep Groove Ball Bearings I-Coefficient Yengxube Incane kakhulu - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-Deep Groove Ball Bearings I-coefficient ye-friction incane kakhulu
Isimiso sokusebenza: ama-ball groove ama-deep groove ikakhulukazi athwala umthamo we-radial, futhi angathatha umthwalo we-radial nomthwalo we-axial. Uma kutholakala kuphela ngemithwalo yemisebe yomsindo, i-angle yokuxhumana i-zero. Lapho ama-ball bearing ajulile enezikhala ezinkulu, ephethe ukuxhumana okungaxhunyiwe, angakwazi ukumelana nomthwalo omkhulu we-axial, i-groove ball ebhekene ne-coefficient encane kakhulu, ijubane lokulinganisa liphakeme kakhulu.
I-SKF ejulile yebhola ibhola ibheji ejulile i-groove eqhubekayo yomjaho oqhubekayo. Kukhona okuhle kakhulu phakathi komjaho kanye nebhola, okuvumela ukuthi ukuthwala kuthwale imithwalo ye-radial kanye ne-axial. Lolu hlobo lokuthwala luyinkimbinkimbi kakhulu futhi luyinto elula kakhulu futhi alukwazi ukuhlukaniselana ezindaweni ezisheshayo futhi ezisezingeni eliphezulu. Futhi ama-groove amabhola ama-groove ajulile nawowahlobo olusetshenziselwa kakhulu lokuthwala. Ngakho-ke, i-SKF inikeza nezinhlobonhlobo zemiklamo, izinhlobo, uchungechunge nobukhulu bezintambo. I-SKF ebhuloho ejulile yamabhola ebhawundi lobubanzi be-shaft kusuka ku-3 kuya ku-1500 mm ububanzi. Zithunyelwa ngamazinga amathathu okusebenza:
I-SKF yezinga eliphezulu eliphezulu lokubheja
Ikhono eliphezulu le-SKF lomthwalo we-explorer ophethe
I-SKF ithwala amandla e-energy ephumelelayo (E2)
I-SKF iphinda ikhiqize izixazululo zobunjiniyela zezicelo ezithile, kuhlanganise okulandelayo:
I-SKF yezingxenye zokushisa eziphezulu kakhulu
I-SKF imithwalo yamafutha oqinile
I-SKF i-bearings ebhekwe
I-SKF i-polymer bearings
I-SKF NoWear ayigqoki lutho
I-SKF yokuthinta inzwa yesikhungo
Ngamunye we-ferrule we-deep groove ball ephethe isakhiwo ine-groove eqhubekayo yohlobo lwe-raceway ene-cross cross mayelana nengxenye eyodwa yesithathu ye-equatorial circumference ibhola. Ama-bear groove ball bearings asetshenziselwa ukuthwala umthamo we-radial, kodwa futhi angakwazi ukumelana nomthwalo othile we-axial. Uma ukukhanya kwe-radial kwe-bearing bearing kwanda, ngehlobo lwezingxube ze-angular contact ball, zingakwazi ukumelana nezinkomba ezimbili zokushintsha i-axial load. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zezintambo zomhlobo ofanayo, ukukhiqizwa kunomlingana omncane wokufiphaza, isivinini esikhulu kanye nokunemba okuphakeme, futhi kuyindlela ekhethiwe yokuthwala ukukhethwa komsebenzisi. I-deep groove ball bearings isakhiwo esilula, esilula ukuyisebenzisa, iyona ivolumu enkulu yokukhiqiza, iningi kakhulu elisetshenziswe ekilasini lamabherethi angenisiwe.
Izintambo ezingezona ezejwayelekile ezingajwayelekile